Postal Codes API - Kuwana kune Yepasi Pose Kodhi Code Dhata
Tarisa makodhi epositi, tora ese makodhi epositi renji daro uye zvimwe zvakawanda nepositi kodhi API.
Pasi rose Dhata
Nyore kushandisa API
PostalCodes.app chishandiso chinokutendera iwe kuti uwane ruzivo pane akasiyana makodhi epositi kutenderera pasirese. Unogona kuwana kodhi dzeposvo kure kure mumakiromita kana mamaira, kana kuwana ruzivo rwepositi kodhi zvakajairika.
GET Tora makodhi eposvo mukati mechinhambwe
Neichi chiri nyore kushandisa endpoint iwe unowana runyorwa rwePosvo kodhi dziri mukati meiyo nzvimbo yakatarwa. Muenzaniso wekukumbira unodzosa runyorwa rweakasarudzika makodhi epositi, runyorwa ruzere rwemakodhi epositi uye ruzivo rweimwe kodhi yepositi.
Yedu API inogamuchira zviyero zvemakiromita mumakiromita (Default) kana mamaira.
Kuti uchinje chiyero kuenda kumakiromita iwe unofanirwa kuisa ms paramende muchikumbiro chako:
Mhinduro yacho ichaita seiyi:
GET Tora makodhi epositi
Muenzaniso unotevera unodzorera iwo mapositi emakodhi anoenderana nemubvunzo wekutsvaga
GET Tora tsika data
Iwe unogona kupfuudza mamwe maparamende kuti utore izvo chete zvaunoda mumhedzisiro, ingo wedzera iyo kukosha fields mune chako chikumbiro.
+94 Nyika dzakatsigirwa
CR (Kosita Rika)
DO (Ripabhuriki Dhominika)
GB (nyika dzakabatana)
GG (Guernsey naAlderney)
LK (Shiri Ranga)
MH (Zvitsuwa Masharo)
MP (Maodzanyemba Zvitsuwa Mariyana)